Popularityfọdụ ntinye ngwa mgbakwunye WordPress ebugharịla site na nrụnye nkeonwe ma ọ bụ nke ndị ahịa. Gịnị banyere azụmahịa? Anyị achịkọtara ndepụta nke ngwa mgbakwunye kachasị amasị anyị nke anyị kwenyere na-enyere ndị ọrụ azụmaahịa WordPress aka inweta nnukwu ọdịnaya ha yana chụpụ nsonaazụ site na injin ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta, site na ekwentị mkpanaaka, mbadamba nkume ma ọ bụ desktọọpụ… wee mejupụta usoro mmekọrịta ha na vidiyo.
Ebe m mepụtara ụfọdụ plugins ndị na-ewu ewu, enwere m ịnụ ọkụ n'obi mgbe niile ịchọta na ịkekọrịta plugins nke na-arụ ọrụ dị ịtụnanya iji bulie, bulie, na mepụta ọrụ n'ime WordPress. WordPress plugins bụ ma ngọzi na ọbụbụ ọnụ, ọ bụ ezie.
WordPress ngwa mgbakwunye Nsogbu
Na mgbakwunye, ọtụtụ n'ime Best WordPress Plugins Nsuso ahaziri onye blogger nke onwe ya ma ghara ilekwasị anya na azụmaahịa na mbọ ha pụrụ iche n'ịmepụta na ịmepụta atụmatụ dị iche iche nke na-enyere aka ịkwalite azụmahịa ha. N'okpuru ebe a bụ usoro a nwalere ma bụrụ eziokwu WordPress plugins maka azụmahịa na anyị kwenyere na ha kachasị mma na mbara ala WordPress plugins.
Ihe Ntaneti WordPress kacha mma iji soro na ndị ọbịa
Ihe - Ọ bụrụ na ị na-achọ ịgbakwunye ihe omume, ndebanye aha, gafee ọtụtụ ebe na saịtị WordPress gị, ngwa mgbakwunye a na-akwado nke ọma ma nwee ọtụtụ atụmatụ.
ndọda Forms -Mwube ụdị ngwa ngwa na mfe yana nhọrọ nhazi dị iche iche na-arụ ọrụ nke ọma yana ọrụ ndị ọzọ dị ka PayPal, MailChimp, AWeber na ndị ọzọ. Ihe mgbakwunye na API dị maka ịrụ ọrụ arụmọrụ. Ọ bụrụ na ị na -eji Elementor Pro, ị chọghị ya ebe fọm bụ akụkụ ya.
Ihe Ntaneti WordPress kacha mma iji mee ka nchịkwa WordPress gị dịkwuo mma
Plugins WordPress kachasị mma maka nhazi na ndezi
Ihe Ntaneti WordPress kachasị mma iji mee ka afọ ojuju na iru ya
ARVE Advanced Na-anabata Video Embedder - Vidiyo agbakwunyere nwere ike bụrụ ihe nro maka ịnọgide na-enwe nhazi nhazi na saịtị gị. Amụma WordPress na-ebido ọtụtụ nyiwe, mana ọ kwadoghị na ha na-anabata.
OneSignal - mkpanaka mkpanaka, ntinye weebụ, email, na ozi ngwa. Gwa ndị debanyere aha na ọkwa ọ bụla bipụtara.
WP Onye ọrụ Avatar - WordPress ugbu a na-enye gị ohere iji avatars omenala ndị a na-ebugo site na Gravatar. WP User Avatar na-enyere gị aka iji foto ọ bụla etinye na Media Library gị dị ka avatar.
Kacha mma WordPress ngwa mgbakwunye na-ebuli gị WordPress n'Sitentanet
Onye na-enyocha Njikwa Broken - Broken Link Checker na-enyocha ma na-anwale njikọ niile dị na ya na njikọ mpụga na saịtị gị na-achọ njikọ ndị gbajiri agbaji. Ọ na - enyere gị aka idozi njikọ ọjọọ iji melite SEO na ahụmịhe onye ọrụ.
Ihe kacha mma WordPress ngwa maka kuki na data nnabata
Kacha mma WordPress ngwa mgbakwunye Chebe gị WordPress Site
VaultPress - Chedo ọdịnaya gị, isiokwu, plugins na ntọala gị site na iji nkwado ndabere na nchekwa na akpaka nyocha.
Ọrụ WP Ọrụ - Ihe ntinye ederede WordPress zuru oke iji debe ndekọ nke mgbanwe onye ọrụ, mee ka nchọpụta nsogbu dị mfe ma chọpụta àgwà enyo n'oge na-adịghị anya iji gbochie obi ọjọọ.
Tags: Akismetkacha mma pluginskasị mma wordpress pluginsazụmahịa WordPress pluginsccpacdnnnabata ngwa mgbakwunyeiwu kukiNchịkwaihe ntanetị googleọkpụkpọ PodcastPubSubHubbubohere drafts oherená mgbakọ na mwepụrediregharịụzọNgwaọrụ wijetịwijetịWordPresswordpress oditi logwordpress ndabere ngwa mgbakwunyewordpress cdnwordpress cdn ngwa mgbakwunyewordpress ecommerce ngwa mgbakwunyewordpress ụdị ngwa mgbakwunyeWordPress pluginswordpress Podcast ngwa mgbakwunyewordpress smtp ngwa mgbakwunyewordpress na-elekọta mmadụ òkè pluginrp wp
Jenụwarị 5, 2015 na 11:21 PM
Nnukwu ndepụta na infographic. Dị ka ọ dị na mbụ, ụfọdụ ochie, ọkacha mmasị ọkacha mmasị na ụfọdụ ndị ọhụrụ m ga-aga lelee! Daalụ maka ịkekọrịta.
Jenụwarị 6, 2015 na 1:53 PM
Amaghị m otu ị ga - esi kwuo na peeji a nwere ike ịgụ ya? Aghaghị m ịgafe ọkara iji nweta ihe m ga-agụ ma ọ nweghị uru ya. Ọ bụrụ n ’ị chere n’ otu ibe 3/4 nke bọtịnụ nwere agba na - acha ọkụ na mgbapụta na - eme m iwe bụ ịre ahịa azụmaahịa, ị tufuru ya. Naanị ihe na-enye m nsogbu bụ ide ihe a ka m kọọrọ gị ihe ụfọdụ, dịka ị nwere m. Nke ahụ bụ CUT na CHASE. Enwere m ike ụlọ akwụkwọ ochie na teknụzụ weebụsaịtị na-agagharị ọsọ. Mana n'ezie ire ahịa ka na-ewulite kọntaktị azụmaahịa na ị nweta ozi na ndị gị na ya? Agaghị eju m anya ma ọ bụrụ na imirikiti ndị na-agụ akwụkwọ gị na-acha odo odo. Ana m aga n'ụzọ ahụ.
Daalụ maka nzaghachi, Steve. Anyị na-enye ọdịnaya ebe a na-enweghị ụgwọ gị na ndị na-agụ akwụkwọ anyị nwere ọnụọgụ abụọ maka ọtụtụ afọ. Enwere m mmasị karị ịnọgide na-arụ ọrụ na nduzi nke ndị Fans anyị, ndị mgbasa ozi anyị, na ndị na-akwado anyị. Echiche kacha mma.
Jul 9, 2015 na 9:48 PM
Ndewo Douglas! Blog na-akpali mmasị ị nwere ebe a. Nnukwu enyemaka. Daalụ.
Daalụ! Na-asị gị nnọọ!